Fiaramanidina mpandeha shiliana sivy no voatery nidina an-tanety noho ny fandrahonana tamin'ny baomba
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fiaramanidina mpandeha shiliana sivy no voatery nidina an-tanety noho ny fandrahonana tamin'ny baomba
Aogositra 18, 2018
Seranam-piaramanidina sivy any amin'ny habakabaka Shiliana, Peroviana ary Arzantina no voatery nidina an-tanindrazana noho ny fandrahonana baomba.
Seranam-piaramanidina sivy any amin'ny habakabaka Shiliana, Peroviana ary Arzantina no voatery nidina an-tanety noho ny fandrahonana baomba, hoy ny tompon'andraikitra misahana ny fiaramanidina sivily.
Ho an'ny sidina dimy, ny renivohitr'i Chili, Santiago, no niavianana na ho aiza. 11 ny fandrahonana baomba natao, saingy noheverin'ny tompon'andraikitra ny roa amin'ireo "fictif", satria misy ifandraisany amin'ny sidina tsy mandeha.
Nanamafy ny tompon'andraikitra peroviana fa a Latam Airlines ny sidina 2369 avy any Lima, Peru, hatrany Santiago, Chili, dia voatery nidina an-tseranana tao amin'ny seranam-piaramanidina rezionaly tao Pisco, Peru ny marainan'ny alakamisy teo. Ny manampahefana Peroviana dia nahazo fampahafantarana momba ilay baomba voalaza fa an-tsambo avy any amin'ireo mpiara-miasa aminy shiliana.
Ny sidina Latam 433 avy any Mendoza, Chile mankany Santiago dia nafindra teny amin'ny làlambe noho ny fandrahonana baomba iray hafa, raha ny sidina Latam 800, avy any Auckland, New Zealand, dia nanao fiantsonana vonjy maika tany amin'ny toerana itodihan'i Santiago.
Fiaramanidina nandeha avy tany Buenos Aires nankany Chili no voatery nidina tany afovoan-tanànan'i Mendoza, Arzantina, ny alakamisy teo. Navoaka sy nikatona ny seranam-piaramanidina, ary nisy sampan-draharaha maika nanadihady ny zava-nitranga.
Sky Airlines, kaompaniam-piaramanidina lehibe faharoa ao Chili ao aorinan'i Latam, dia nahatratra telo tamin'ireo sidina farafaharatsiny. Ny sidina Sky Airlines 543 dia notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina Rosario any Arzantina. Nandritra izany fotoana izany dia niainga avy tao Mendoza, Chile ny sidina Sky524 162 ary nanao fiantsonana vonjy maika tany Santiago alohan'ny handehanana mankany Rosario; ary ny sidina Sky XNUMX dia niainga avy tany Santiago, talohan'ny nanomezana toromarika azy ireo hiverina sy hidina.
Nisy sidina roa hafa napetraka, saingy tsy nanome antsipiriany bebe kokoa ny manampahefana misahana ny fiaramanidina Shiliana.
Rehefa nojerena dia nambara fa tsy misy mipoaka ny fiaramanidina rehetra. Tsy nisy fampahalalana nomena momba izay nanao ny fandrahonana tamin'ny baomba, na raha misy fifandraisana eo amin'izy ireo. Miezaka ny mamantatra ny niandohany ny polisy.
"Manana valizy iray na roa navela foana isika, ara-dalàna izany," hoy ny filohan'ny Manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily, Victor Villalobos Collao, tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety iray tao amin'ny seranam-piaramanidina Santiago, "Fa tranga miavaka tanteraka ity."
Paris: Makà fotoana
Ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana teo aloha Kofi Annan dia maty tamin'ny faha-80 taonany